Iyo Burkinabè diaspora inotsigira Roch Marc Christian Kaboré - Jeune Afrique - T mov RELAY
Iyo Burkinabè diaspora inotsigira Roch Marc Christian Kaboré - Jeune Afrique
Burkinabè diaspora yakatanga musangano wayo wekutanga wezvematongerwo enyika muAbidjan nemugovera kupesvedzera sarudzo yaNovember musarudzo muBurkina.
Vamwe chiuru vamamiriri kubva kunyika gumi neshanu vakatanga muhotera hombe muguta rehupfumi reIvorian, mubatanidzwa wezvematongerwo enyika unonzi "Ino ndiyo nguva!" "
"Takafunga kusarudza Mutungamiriri Roch Marc Christian Kaboré uyo ari kutsvaga kota yechipiri nekuti akabvumira ma diaspora kutora mukana musarudzo, kuwana zvigaro gumi muparamende (mudare reparamende inotevera) uye Iva neshumiro yekuBurkinabè kune dzimwe nyika, "akazivisa Moumouni Pograwa, mutauri wake.
Kuna Moumouni Pograwa, "Mutungamiri Kaboré akamira achipokana nehugandanga uye anoita nhoo yekudzivirira nedenda iri".
Iyo Burkinabè diaspora inomiririra nharaunda yemamirioni manomwe, vanopfuura hafu yavo vanogara muCôte d'Ivoire. Iyo inoshandura yakaenzana makumi mashanu neshanu FCFA (zviuru mazana 58 emadhora) kuenda kuBurkina Faso gore rega rega.
Roch Marc Christian Kaboré akaiswa mari muna Chikunguru 11 nePeople's Movement for Progress (MPP), bato rake, kumhanyisa kechipiri, nyika ichinyura mumhirizhonga yejihadist mumakore mashanu.
Pro-Compaoré rally muOuagadougou
Uyezve, Mugovera, muOuagadougou, iweKuungana kwevatsigiri veMutungamiri wekare-Burkinabè Blaise Compaoré wekuti adzokere munyika kwadzivirirwa.
Chishandiso chakasimba chemapurisa chakavakirwa padyo nePeople's House muguta guru reOuagadougou, kwaifanira kuratidzirwa kuratidzira, kwakadzivirira zviuru zvevanhu kuungana. Hapana chikonzero chepamutemo chakapihwa nemapurisa, mamwe mapurisa mapurisa arimo kuratidza kuti rally "yakamiswa".
Blaise Compaoré, uyo anova nyaya yekune dzimwe nyika anosungwa, pari zvino anogara kuCôte d'Ivoire kubva kwaanotadza kudzingwa nekuda kwehukama hwake hweIvorian hwenyika yakatenda kumukadzi wake.
TELES RELAY 23426 Posts 1 mashoko
Mabhuku: iyo nyaya yebofu reBafia, kukanganisa kunotyisa kwekoloni - Jeune Afrique
6 zvakanakira zvigaro zvinoita kuti rudo rimire